Irhafu yeendwendwe - Iziko Loncedo lakwa-Airbnb
Iirhafu – isihloko soncedo
Ndiyifumana phi i-invoyisi yam ene-Value Added Tax?
Ababuki zindwendwe neendwendwe banokufumana ii-invoyisi zabo zeVAT kwiakhawunti yabo ka-Airbnb.
Ndiyifaka njani inombolo yam YeValue Added Tax (VAT)?
Ukuba unenombolo yeVAT, ungayidibanisa neakhawunti yakho ka-Airbnb. Ungayitshintsha kwiisetingi zeakhawunti yakho.